Samachar Batika || News from Nepal » शरीरमा मुसा छ, झुक्किएर पनि नगर्नोस यस्ता काम, मुसा हटाउने घरेलु बिधि
पोखरा – शरीरमा मुसा आउनुले पनि आममानिस समस्या परिरहेका छन् । कसैकसैमा त लामो समय देखिको मुसाले हात, खुट्टा नै कु’रूप पनि बनाएको हुन्छ । मेडिकल भाषामा “वार्ट” भनिने मुसा अरु केहि नभएर छालामा हुने एक किसिमको भाइरसको सं’क्रमण मात्र हो । शरीरमा आउने मुसाका कारण मानिसहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपयलाई त मुसाका कारण शरीरका अं’गहरु छोप्न पर्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ ।
अनुहार, आँखीभौँ, आँखाको परेला, नाकको टुप्पो, हात, खुट्टामा समेत मुसा आइदिन्छ । जसले मानिसलाई कु’रूप नै पनि बनाउँछ । यद्यपि, चिकित्सा विज्ञानले यसलाई छालारोग ठान्दछ ।
शरीरमा मुसा आउनुको मुख्य कारण ह्युमन पेपिलोमा नामक भा’इरस हो । यस्तो भा’इरसले स–साना, खस्रो, क’डा खालको द’र्दरहित दानाजस्ता मुसा उत्पादन गर्छ । केही मुसा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि फैलने गर्छ । मुसा तोरीदेखि अंगुरको दानासम्मको आकारमा हुन्छ ।
झुक्किएर पनि नगर्नोस् यस्ता काम:
शरीरमा भएको मुसाबाट र’गत आएमा, मुसा भएको ठाउँ निरन्तर चिलाएमा र दु’ख्यो भने चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । यस्तो लक्षणले क्यान्सरसमेत हुन सक्छ ।
१. कतिपयले घरमै वा पार्लर पुगेर मुसा हटाउने गर्छन् । जुन गलत हो ।२. मुसाले अनावश्यक दुः’ख दिएको छैन भने त्यसलाई छोइरहनु हुँदैन । यदि मुसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएमा चिकित्सकबाट लेजरको प्रयोग गरी हटाउनुपर्छ । स्वस्थ मानिसमा करिव ३० प्रतिशत मुसा ६ महिनामा र ६० प्रतिशत एक वर्षमा आफै हराएर जान्छ । यदि मुसा सानो हुँदै गएमा र रगतका शिराका काला धब्बाहरु देखिएमा यो आफै हराएर जान् ।
हाम्रो छालामा जिबानु को कारण ले गर्दा स-साना मासु पलाउने गर्दछ । जसले हाम्रो छालाको माथिल्लो तहमा असार गर्दछ र मासु छिटो बढ्ने गर्दछ । साधारणतया मुसा धेरै खतरानाक हुदैनन तर सौदर्यमा निकै नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ । मुसा(गाठोगुत्ठी) प्रायजसो घाटीमा आउने गर्दछ । सानो मासु झुण्डीएको जस्तो देखिन्छन मासु र यसको रंग समान हुन्छन ।
कसरी हटाउने सबैभन्दा पहिला गाठोगुत्ठी हो वा छाला को घा’उ हो भन्ने छुट्याउनु पर्दछ । डाक्टरलाई जाचाउनु पर्दछ । छालाको घा’उ (स्किन ट्याग)पनि घाटी वरिपरी नै आउने गर्दछ। प्राय यी दुबैको छुट्टाछुट्टै उपचार गरिन्छ। घाटीमा आउने मुसा हटाउनको लागि प्रायजसो घरेलु उपचारको रुपमा लसुनको प्रयोग गरिन्छ ।
लसुनमा शक्तिशाली बिशानुनासक गुण हुन्छ जसको कारण ले गर्दा मुसाको स’क्रमणबाट बच्न मद्दत गर्दछ। उपचार बिधि केहि लासुन लाई गाठोगुत्ठी भएको ठाउमा थिचेर राख्नुहोस।त्यस पछी यसलाई पट्टिले बाध्नुहोस र ३० मिनेट त्यसै छोड्नु होस् र पछी पानी ले पखाल्नुहोस। यस बिधि लाई प्रत्यक दिन २ पटक २ हप्ता सम्म गर्ना ले राम्रो परिणाम मिल्दछ। लसुन के मुसालाई खटिरामा परिणत गरि एक हप्तामा नै झार्दछ लसुनको प्रयोग दोहोर्याएर गर्नु हुदैन।
ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु – मुसा शरिरमा एक ठाउ बाट अर्को ठाउमा सर्दछ यस समस्या को उपचार गर्दा गाठोगुत्ठीमा लगाईसके(लसुन/प्याड) पछी त्यस सामाग्री लाई अरु भागमा प्रयोग गर्नु हुदैन। -तपाईलाई मधुमेह छ भने खुट्टाको मुसाको उपचार गर्ने प्रयास नगर्नुस। -आफ्नो अनुहार वा सं’बेदनशील अं’ग जस्तै: प्र’जनन अं’ग,मुख वा नाकको प्वालमा भएको मुसाको घरेलु बिधि अपनाई हटाउने प्रयास नगर्नुस चिकित्सक संग सल्लाह गरेर सोहि अनुसार गर्नुस।
प्रकाशित मिति १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०७:५२